दसैंमा नेवार सुप ‘बुल्ला’ खाने कि? :: Setopati
दसैंमा नेवार सुप ‘बुल्ला’ खाने कि?
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, असोज २६
सोभिता महर्जन बुल्ला पकाउँदै। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
नेवार समुदायमा देवीदेवतालाई राँगा चढाइने हुँदा यसलाई प्रसादका रुपमा पनि लिइन्छ।
‘मैले धेरै पटक जाँड खाएको छु। तर कः बाट कुनै परिकार बन्ला भनेर सोचेको पनि थिइनँ,’ प्रशान्तले भने, ‘हाम्रोतिर जाँड बनाएर बचेको कुरा गाई, भैंसीलाई खुवाइन्छ। यहाँ त्यसैबाट यस्तो सुप बन्नु मेरा लागि नौलो हो।’
हामी पनि दसैंमा बुल्ला पकाउने की?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २६, २०७५, ०६:४१:००